Inan Yar oo Warqad Qalbi Taabasho ah u Dirtay Aabbaheed oo Doorasho Madaxweynenimo Lagaga Guulaystay – Tusmoonline.com
Inan Yar oo Warqad Qalbi Taabasho ah u Dirtay Aabbaheed oo Doorasho Madaxweynenimo Lagaga Guulaystay
Arrimaha Bulshada Dhacdooyinka Wararka	December 22, 2016	180	Like
Madaxweynaha dalka Ghana Mr. Maha oo doorashada madaxtinimo ee dalkiisa lagaga guulaystay dhowaan, ayaa waraaq qalbiga taabay ka helay gabadh uu dhalay oo 8 jir ah.
Mss. Farida Gyamfua Mahama waxa ay waraaqdeedu ku saabsanayd inay aabbaheed ku qanciso inuu dalka wax badan u soo qabtay oo guul-darradu aanay waxba ahayn, waxaanay xasuusisay in ay jeceshay, shayga ugu muhiimsanna yahay inuu qabstay wixii uu karayey.
Waraqadda gabadhan yar aabbaheed u dirtay oo qallin ku qornayd oo Maankaab soo tarjumay waxay u dhignayd sidan:
“Waxaan aaminsanahay aabbahay. Allena waa aaminsan yahay aabbahay. Aabbe waxaad u shaqaysay si adag si aad nolosha wax uga beddesho, una habayso dalka Ghana. Waxa uu qabtay wax badan sida dugsiyo waxbarasho, waddooyin. Waxa uu qabtay wax badan oo aanan waxba ka odhan karin. Wixii uu karayey wuu qabtay, taasina waa shayga ugu muhiimsan.
Aabbahay waan jecelahay, Allena waa jecel yahay. Sidoo kale isna wuu i jecelyahay, Ilaahayna wuu jecelyahay. Qalbiga ku hay aabbo,” ayey tidhi gabadha uu dhalay Madaxweynihii Ghana ee lagaga adkaaday doorashadii dhowaan ka dhacday dalka ku yaal galbeedka qaaradda Afrika.
Xigasho: Shabakadda Maankaab